Dugore Kuiswa nyoro mubeche 28.07.2021 28.07.2021 Comments
If you want endai mushop iri paservice station iri opposite southerton police staion kuseri kweLas Vegas muchaona mukadzi arimoNdichipiwa change after ndatenga hangu a pie nedrink for lunch, ndakabva ndati sorry but can I confess kuna mai vayeShe said confess chii ndikati haikona kuzotsamwa asi.
Muchindiona ndichiuya kotenga kuno mazuva ese its not kuti ndofarira kutenga muno sterek asi kuti ndofarira kutengeserwa nemi, I just like seeing your face at least once a day. Ndikauya musimo muno zviya pamunenge muri off handitenge, plus off yenyu iriko every Tuesday and Friday ndikunyeba here. She smiled and said aiwa hamusi asi kurikuenda nenyaya yenyu ndirikukuona, musati maenderera I am married!!!
I smiled back and said me too!!! Ndakaburitsa card rekugraft kwangu ndokuvatambidza nefive dollars ye airtime, ndikati I am not going to ask for your number but will you please call me mangwana murikumba coz I know muri off. Ndakabva ndabuda ndokuenda kubasa.
Mangwana akasvika, round about luch time ndakanzwa fon yakurira apa number handidziziye. Ndichingodaira zvikanzi saka nhasi ukutengera kupi lunch coz handiko. From there tanga takutaura daily paanenge arikubasa, sending each other ma chats, kana takuenda kumba tese we cut comms.
I used to tell her how beautiful she is and how beautiful she looks kana asina hembe to me and I have a great fantasy of us tichiisana and I really wanted her to bring my fantasy to reality bla blaTakaronga kuti auye kubasa paanenge ari off one day then ndokusangana ndokuenda kuma lodges, ko mu southerton anombopera here ma lodges akachipa futi.
Takaenda paye ndokusvika hedu ko ini ndoita zvandoda kubasa ndakangobuda ndokunosangana nemukadzi uye. Mukadzi uyu mutsvuku akaita mupfupi bhijana, anematako kwete bhijana uye ma hips, kana akamira so chinena chinenge chakafuta and mazamu ake akaoma kuti twii since asina kumboyamiwa coz kubva zvaaroorwa vakashaya mbereko mumba mavo.
Apa ane ma lips ekuti ukaaona unotoona mboro yako yakutodyiwaAnyway, hatina kupedza nguva takangosvika nekutohakirana ndokutanga, kukisana paye, takabvisana hembe tichiita zvekukamburana chaizvo munongoziya zvevanhu vanenge vachibiridzira manakire azvo akatosiyana. Takakatanurana hembe zvehasha zviya pasina nguva tainge taa naked. Ndakamusimudza iye ndobva akochekera makumbo ake kumusana wangu, ndakanangisa mboro ndakamutakura kudaro ndobva ndaiti shwee, ndaiita wekusimudzira iye acidzikira ega mboro ichipinda yese, ipapo handingati kukoira asi ndaiita kuzhaka munhu, ndakaenda naye ndokumuzemberesa kumadziro ndakamusenga kudaro apa akaisa maoko ake around my neck and she tried to kiss me asi nemapindire aiita mboro yaiita kupinda yese, chaaingokwanisa kuita kuchemerera chete mboro irimo and yakagumha chibereko chaicho.
Ndakamuzhegedzera nayo ndakamutakura kudaro till ataura egaShiiiiiiit bbby dnt stop, ummm am cumming shaa!!! Ipapo ini ndanga ndisati, ndakamudzikisa from kumutakura ndokubva ndamuisa pasi asi akamira takatarisana.
Akauya pandiri nekajira ndokutanga kupukuta mboro,achiipukuta kudaro ndakabva ndanzwa kunaka pamsoro wemboro, kusumudza musoro wangu so wanei mboro yatoo mukanwa, she looked at me and said, nxaa mboro inonaka mhani iyi, she continued sucking my dick, haina kutora nguva ndokubva yamira again. Ndaka buruka pamubhedha ndokumufongoresa akabata mubhedha, rimwe gumbo ndakati arikwidze pamubedha rime ndokurisiya pasi, ipapo mboro yainge yakapinda yese ndokumukoira zvebasa, akakoira back apa ndakamubata ma shoulders ake and dzimwe nguva ndaimudhonza vhudzi iroro kuti anatsouya kumashure ndinatsomuzhaka nayo, takasvirana till ndakunzwa mboro seichasvuuka.
Ndakazomuchinja ndokumuisa makumbo pamafudze and beche range ranatsovhurika zvekuti handina kukoira kaviri katatu ndakanzwa waaaaaa waaaaaaaa waaaaaaa ma sperms achiduruka achizadza chibereko. Time ndoyakazoita shoma asi ndaitoda even zvehusiku hwese naye so we will meet for the second time!!! Ndakayeverwa kudaro gulez vakangosvinura all of a sudden ndobva tatarisana mumaziso, Ha!! Nguva dzakazosara dzopera asi mboro haina kana kuvata, ndakangoti mwari ndiregererei asi maiguru nhasi ndovasvira chete, kugaya mboro chete kwavarikuita uku nxaa, blaz vanenge varikuvajaidza.
Ndichibva kubasa ndakangoenda kumba straight, ndokusvika maiguru vatopedza kubika zvikanzi ndokuisirai chikafu here bamdiki, ndikati isai tidye tese, since taingova two hedu. Ndakabva ndaita sendakusumuka sendaramwa, vakabva vandibata ruoko zvikanzi bamdiki kaani garai pasi tibgwerekete sevanhu vakuruNdakabva ndagara, then she started, Bamduku ini nemukoma wenyu tatova nesix months tisingakwirane, tinewo zvatirikunetsana so even vachiuya havo everymonthend hapana zvatomboita saka ehe ndasuwa kukwirwa, vakabva vakaba kumeso and started sobbing, Ndakabva ndanzwa tsitsi dzangu dzese, mboro nekubva yatomira, ndakabva ndavati is there anything that I can do to assist?
She looked me in the eye and said, I doubt bamdiki maybe mogona kuzotaura nemukoma wenyu kuti chii chirikunetsa, vakabva vasimuka kuenda. Ndakabva ndati makunorara here zvikanzi ehe murare mushe once again sorry henyu bamdiki fo all thisNdakabva ndangorovera moyo kudombo bva ndati, kana makurara musakiye door renyu remubedroomHavana kupindura then off she wentNdakapedza kudya ndokunosuka hangu ma plates coz ndaipishingana nepfungwa kuti ndoenda here kuna gulez or not, After almost one and halft hours,ndakabva ndaenda muroom mangu ndokubva ndabvisa hembe dzese ndokusara nepant ndokuenda kunagulez, ndanga ndazvipira kuti haa better ndingonovasvira hangu mboro ivate.
Vana ava vamwe vacho vaitiza vasina kubhadhara rent, saka takati better kutsvaga caretaker isu tiri kuno ku Harare kumabasa hedu. By the way this house of ours iri kuGweru, saka tairojesa vana veMSU. So mukutaura neshamwari dzangu, one of my best friends ane brother yake Born Errectus, who was also doing a degree pa MSU ipapo and he was looking for a place to stay, so we agreed ne friend yangu kuti auye azoita caretaker ipapo achigara hake ku cottege,then achiita manage isu tichizouya kuzo collector mari and over see paden.
Imba yaitoda ma renovations so it meant Born was to stay some days ega before pauya mamwe maroja, but takamudza kuti asiye one room asaisa vanhu imomo since taizoishandisa on our way to or from Bulawayo, so it was to be our spare room, iye achigara hake ku cottegeUp and down yekugadzirisa imba yakatanga, so one weekend takaenda na hubby kunoita monitor progress, apa ndaiva ndakatobeeper nekuti I was frustrated sexually. At 45 hubby wangu was becoming inactive mu bed, dzimwe nguva yaitoramba yakasvava zvayo uku ini ndikuda zvekusvirwa.
Ndakabva ndamhoresana navo bva ndati ndakuenda hanku kumota. Shasha dzakasara dzikataurirana na Hubby, after vapedza takabva tadzokera hedu back kuHarareThe following weekend, takadzokera fut kuGweru, tavako ndakapinda hangu mumba ndokutanga kutarisa ma renovations, hubby ndokusara achitaura nemaneibours edu. Ipapo akabva abuda zvake ndokunotanga kusasa nyaya na hubby wangu. Uku Bamdiki is 34, and ndofuti imwe age inoita seyakatemerwa nyora muchiuno nekuda mutsetse and vachigona kusvira fut type dzachoAnyway, takazodzokera KuHarare hedu na hubby asi mupfungwa dzangu ndaingogaya kuti zvairevei zvaitwa na Born izvi?
Ndakaritairsa futi bva ndaziya kuti pane zvakawandisa zvaraireva chete, asi I chose to ignore it AGAINSo ndakazoudza hubby bva anditi ndizoende ini ne pick up kunobatsira kutakura ma tiles acho since iye hubby anga ari tied up, I was supposed to go sat maxen ndodzoka the same day kana ndapedza. So ndakaenda hangu kuGweru kuye ndega uku muroad ndaingonetsekana nezvakaitwa na bamdiki. Ndakazosvika hangu kuGweru ndokuenda kunotakura ma tiles, ndaa ne load yechitwo, mota ndokurova porthole , ndokudambura balljoint munongoziyawo ma isuzu type haatane.
I foned hubby zvikanzi nepanetime, ita kuti mota igadzirwe, kana yatadza kupera no worries unorara wozofumira as soon as mota yanatsogadzirwa. Luck enough zvakaitika padhuze nepaden, so ndakati Born aite organize kuti isotwe. Mota yakapera kugadzirwa asi time dzanga dzaenda so I decided kungorara zvangu. So it meant kuti the whole yard it was just me na bamdiki, ivo vaiva havo ku cottege kwavo, which is not far from main house, music ne any noise yaiitika kucottege yaitonzwika coz ndedziya cottege dziri mumadziro chaimo me main house typeNdichitambisa fone kudaro, ndaitonzwa zvangu noise ye TV yemuroom maBorn, achiimba dzimwe nguva, achiita kurakidza kufara chaizvo.
After dza kuma around 8, ndakanzwa knock pa door pangu, ndokuti come in, Born akapinda neplate yanga ine sadza nebeef zvanga zvakanatsobikwa mushe mushe. Akandipa mvura yekugeza, bva ndatanga hangu kudya, ipapo zvikanzi na Born, nhas ndoda kukuchengetai maiguru, I overheard the other day muchipopotera blaz, ndakazvinzwa zvese, musanyanyonetsekana maiguru, just know kuti ini ndiripo, nyama dzamukoma dzakuti netei idzo.
Ndakamuti waita hako nechikafu unogona kuchienda hako, coz ndanga ndakuona kuti kwanga kwakuenda nyaya yacho hana yangu yanga yakutorova kare. Ndakazombopedza here sadza racho, uku beche ranga rakutopfura pfura zvaro, ahhNdakazoti time time, rega ndingomutumira chat, bvandamuti thanx bamudiki for the food bva ndaona typing……..
Ipapo Bamdiki vanga vakaisa ka smile kaye kekutsunyidzira ma lips ku one side, ka smile kanoitwa nematsotsi type. Grip ranga ndakavabata naro bamdin zvaiita sekunge sekubvakunzi ndovakabata ka oxygen tank kehupenyu nemoyo wangu, apa mboro yaiita kuhumana irimukati me boxer short ravanga vakapfeka zvekuti ipapo ndaiita kunzwa hana hangu ichirohwa nehanaMboro yanga yakaita kugumha dumbu soo ndichiinzwa ichiita kufemereka iripamsoropeguvhu, apa ini ndaiida kuti inge iri kuzasi kweguvhu, pasi pemuswe wangu ndopandaiida.
Born akananavira ndokukatanura bra, ndokukwidza blouse rangu, mazamu ndokusara pachena, he started sucking my tits, uku ndanga ndapedzesera kuayamwiwa ne last born yangu inenge yatoo form one ikozvinoNdakanzwa magets aye zvino kuti ngweeee mukati kati mebeche rangu. Rakatanga kupisa zvekuti ndanga ndakubvunda makumbo, and he kept on sucking them hard and am sure he wanted them dry.
Ndakashaya pekubata asikana, ndaingomupuruzira msoro wake ndichishinyira nezemo, ndichitomboridza kamhere. Akanditendeudza ndokubva andibvisa pant, akanditsikisa pa heabord, negumbo one, Ini ndenga ndokutobva ndaziya zvekuita, ndakafongora ndokubatirira pa headbord, ndokusanoiterera kuti ichauya nekuside kupiNdakainzwa ichidziya irimuzvidya, ichinonombora precum yangu yaierera, ndakanzwa Born achimeura matako angu kuti beche rinatsosara riri pabani.
Born akaiti shweeeeee, ndakada kugwadama, ipapo ndichitotunda, zvekuti ndakatanga kujambisa jambisa gumbo one riya ranga riri pasi rimwe ndakatsika chete ku headbord, yohwee kani maiiiii, tyoooooooo, ndakabondera bondera msoro kuheadbord nekunakirwa.
Ndichipedza kutunda, Born akabva atanga kundikoira manje, uku kwangu kumba tanga tangojaira iyo yekungoradzikwa nemusana sehuku yahundurwa, zvekutsikiswa ma headbord nani iyeye?? Asikana ndaita kunzwa mboro ichinaka ichikurungwa irimo mubeche yakatasamura nyama dzematako uku akaita kuvhurwa, Bamudiki vachikoira kudaro vakabva vagumisa chigunwe chipfupi pasi pamuswe, pamsoro we anul passage pangu, pandairwisana nekusunga mukosho nebeche raibva ratevedzerawo, ndobva ndanzwa mboro yanatsozadza matama ese ebeche, ipapo mboro yakatanga kunaka worseZvechikapa ndaizvizivirepiwo kana neni, asi ipapo ndakazongonzwa chiuno changu choenderana nehurungudo dzaiitwa nabamudiki kumashure uko, vachiita ku rakasaha beche, kuita beche rekupura chaikoNdakatunda zvekare ipapo ndakapera simba mumakumbo ndichibva ndadonhera pambhedha nedumbu, Bamdiki vakandiradzika zvakanaka, nedumbu iroro, ndokuuya pamsoro, ndokuipfekedzera, ndokubva vavhara makumbo angu ndakarara nedumbu kudaro.
By this position beche raiita kunge ndatova ka virgin, ndainzwa bamdiki vachiita kutsenga beche sebeche, ini ndanga ndakuridza mhere zvino yekurwadzirirwa nekunakirwa zvese ipapo, Bamdiku vanga vakatsigira neni vakandibata muchiuno mangu uku vachi tasamura beche haikona bhichana, ndakatunda asikana uku ndaingonakirwa chete nemboro, ndichipedza kutunda, ndainzwa manje bamdiki dikita rakuita kundonha kumusana wangu uku, asi kuti nditi vakatunda vakaramba yakamira or havasati vatunda, hakuna chandaiziya.
Vakaizvomora vachibva vandisimudzira kuti ndiite zvekufongorera so, vakaisa gumbo one nechekudhuze nema sholders angu, rimwe ndokubva vaita rekupfugamisa, he grabbed ma sholders angu ese ndokutanga kukoira zvine speed yakawedzerwa sezvinoita imbwa zviye, chete ndizvo coz ita was dog style againVakakwatamadza beche bamdiku uku ranga rakupisa manje beche asikana handii kunyena uku richinaka none stop.
Bamdiki vakatanga kufemera mudenga, vachiita sevarikugaka kufema, mboro yakawedzera kusimba irimo mukati,ndokundidzvanyira kwavari, ipapo ndakaziya kuti kwakuda kutundwa, ndichibva ndanatsokodora asikana chiuno mudenga bva ndaisa face pasi chaipo pa mattress, ndokubatirira muma side memubhedha, coz simba ranga robva kumashure nemanakiro anga akuita mboro, ndanga ndisisahwisisi, ndakaridza kamhere ndichitunda, ndichinzwa bamdiki vachi zhamba varisure kwangu, mai ggggg gu gu gu guruu uu uuu, ooohhhhhhh, ahhhhhhhh shiiiiiiiiiit eish, vakabva vaiti ndiiii mukati kati, vakaramba varikumashure ikoko ndakavabereka mboro ichigwinha irikuchibereko, ini ndichibva ndawira pamubhedha vachibva wawirawo kuside kwangu uku hana yavo ndaiita kuinzwa kuti bhi bhi bhi, vachibva vati rabada zvavo, ndakangosimudza msoro ndokuuwisira pa chest pavo nehope stretHope you enjoyed!!
Chi Extra Errectrius Share this:.
After a few drinks takamirira dinner redu thats when I realized that she had a plan, Because aingoshiringnya shinginya kunge paainge akagara paibaya minzwa.
From nowhere akaerekana andibvunza kuti is it true that vanhu vatema makatakura zimboro zihombe down there! Ndakamuzevezera kuti aswedere pedyo neni ndobva ndatora rouko rwake in a naughtly way ndikamubatisa mhungu mubhurugwa kamurungu kakashama muromo kakanditarisa mumaziso zviya zvekuti damin what s this in your pants? She whispered in my ears saying that you are big man, can I have a taste of African man. Ini ndikatiwo zvanguzvaita because ndange ndisati ndamborova beche remuchena.
Dinner could come later, it was time to go to her room without further delay. Mucorridor yakanga yangova bata murefu bata mupfupi takazosara tosvika muroom make akufemera mudenga sendere. Ndakatokurumidza kumubatsira or else ndaigona kuzoenda kumba ndisina bhurukwa zvikanetsa. Yeah kusvira the first time was really good since aida kunzwa mboro yemunhu mutema, akaiyisa mumuromo akatanga kuisvisvina slowly apa ndichiinzwa ichimuka slowly ichikura bigger and bigger kusvika akuita kunge munhu arikudzipwa nayo.
I really enjoyed it and we took turns ekuti iye akandiyamwa mboro ini ndobva ndamudyawo beche rake. By the time yaakatanga kundikumbira kuti ndimusvire juice dzake dzainge dzakutoyerera kubva mubeche rake haaa ndakaiita kurova beche sebeche zviya zvekusiya signature for good. Takatanga nemissionary and then ndokubva ndamurova nekumashure ndokubva atunda ndichibva ndaburitsa mboro yangu zvaakunzi zvaakurwadza. Mboro yangu yainge ichiri kuyerera juice dzemubeche rake achibva ayitora ndokuiyisa mumuromo make until ndatundira mumuromo make and this was my first time kutundira mumuromo memukadzi and it was so good kuona mukadzi achimedza hurume hose and actually leaking my manhood clean with her tongue.
An hour later takasvirana futi apa ndiye ainge akundikoira kusvikira atunda ndokubva aburitsa mboro yangu mubeche rake ndokubva andibvunza kuti ndaida kupedzera mumuromo make or kumudhidhi wake. Ndakasarudza kudhodhi ndokubva amboyenda kunotora lube kuti tiise kuti asarwadziwe ndichiisa mboro mukati, she said aida kuti ndisvire slowly and akati go deeper asi zvinyoro nyoro. Later akazonditi aifarira kusvirwa kumagaro and that the experience brings out the animal in her!
We then lay down relaxing and she started asking questions briefly touching achibvunza on kusvirana tiri 3 one murume and two vasikana zvinoita here? Ndikamuti ehe zvinoita I guess ainge atotaura neshamwari yake and on our next outing we were going to experiment that.
Nguva dzakazosara dzopera asi mboro haina kana kuvata, ndakangoti mwari ndiregererei asi maiguru nhasi ndovasvira chete, kugaya mboro chete kwavarikuita uku nxaa, blaz vanenge varikuvajaidza.
Ndichibva kubasa ndakangoenda kumba straight, ndokusvika maiguru vatopedza kubika zvikanzi ndokuisirai chikafu here bamdiki, ndikati isai tidye tese, since taingova two hedu.
Ndakabva ndaita sendakusumuka sendaramwa, vakabva vandibata ruoko zvikanzi bamdiki kaani garai pasi tibgwerekete sevanhu vakuruNdakabva ndagara, then she started, Bamduku ini nemukoma wenyu tatova nesix months tisingakwirane, tinewo zvatirikunetsana so even vachiuya havo everymonthend hapana zvatomboita saka ehe ndasuwa kukwirwa, vakabva vakaba kumeso and started sobbing, Ndakabva ndanzwa tsitsi dzangu dzese, mboro nekubva yatomira, ndakabva ndavati is there anything that I can do to assist?
Imba yaitoda ma renovations so it meant Born was to stay some days ega before pauya mamwe maroja, but takamudza kuti asiye one room asaisa vanhu imomo since taizoishandisa on our way to or from Bulawayo, so it was to be our spare room, iye achigara hake ku cottegeUp and down yekugadzirisa imba yakatanga, so one weekend takaenda na hubby kunoita monitor progress, apa ndaiva ndakatobeeper nekuti I was frustrated sexually.
At 45 hubby wangu was becoming inactive mu bed, dzimwe nguva yaitoramba yakasvava zvayo uku ini ndikuda zvekusvirwa. Ndakabva ndamhoresana navo bva ndati ndakuenda hanku kumota. Shasha dzakasara dzikataurirana na Hubby, after vapedza takabva tadzokera hedu back kuHarareThe following weekend, takadzokera fut kuGweru, tavako ndakapinda hangu mumba ndokutanga kutarisa ma renovations, hubby ndokusara achitaura nemaneibours edu.
Ipapo akabva abuda zvake ndokunotanga kusasa nyaya na hubby wangu. Uku Bamdiki is 34, and ndofuti imwe age inoita seyakatemerwa nyora muchiuno nekuda mutsetse and vachigona kusvira fut type dzachoAnyway, takazodzokera KuHarare hedu na hubby asi mupfungwa dzangu ndaingogaya kuti zvairevei zvaitwa na Born izvi? Ndakaritairsa futi bva ndaziya kuti pane zvakawandisa zvaraireva chete, asi I chose to ignore it AGAINSo ndakazoudza hubby bva anditi ndizoende ini ne pick up kunobatsira kutakura ma tiles acho since iye hubby anga ari tied up, I was supposed to go sat maxen ndodzoka the same day kana ndapedza.
So ndakaenda hangu kuGweru kuye ndega uku muroad ndaingonetsekana nezvakaitwa na bamdiki. Ndakazosvika hangu kuGweru ndokuenda kunotakura ma tiles, ndaa ne load yechitwo, mota ndokurova portholendokudambura balljoint munongoziyawo ma isuzu type haatane.
I foned hubby zvikanzi nepanetime, ita kuti mota igadzirwe, kana yatadza kupera no worries unorara wozofumira as soon as mota yanatsogadzirwa.
Luck enough zvakaitika padhuze nepaden, so ndakati Born aite organize kuti isotwe. Mota yakapera kugadzirwa asi time dzanga dzaenda so I decided kungorara zvangu. So it meant kuti the whole yard it was just me na bamdiki, ivo vaiva havo ku cottege kwavo, which is not far from main house, music ne any noise yaiitika kucottege yaitonzwika coz ndedziya cottege dziri mumadziro chaimo me main house typeNdichitambisa fone kudaro, ndaitonzwa zvangu noise ye TV yemuroom maBorn, achiimba dzimwe nguva, achiita kurakidza kufara chaizvo.
Ndakamuti waita hako nechikafu unogona kuchienda hako, coz ndanga ndakuona kuti kwanga kwakuenda nyaya yacho hana yangu yanga yakutorova kare. Ndakazombopedza here sadza racho, uku beche ranga rakutopfura pfura zvaro, ahhNdakazoti time time, rega ndingomutumira chat, bvandamuti thanx bamudiki for the food bva ndaona typing…….
Ndakashaya pekubata asikana, ndaingomupuruzira msoro wake ndichishinyira nezemo, ndichitomboridza kamhere. Ndikavabikira vakarara havo ndichibva ndakapfeka hangu mini yangu ndokubva ndarega kupfeka bhurugwa mukati semunhu aida kuteya head, ndasvika pachikoro beche rese ranzwa nekutota apa ndaitya kuti head vaigona kuramba kundisvira. Ndakanoka mu office ma headmaster zvikanzi come in, pandakapinda ndavekuda kuvhara door ndakanyepera kudonhedza mapepa andainge ndakabata ekutsvagisa nzvimbo ndichibva ndafongora ndakatarisa ku door ndichinhonga apa ndikati dako ndinaro mini yandaive ndakapfeka ndikafongora yaitoburitsa munotangira magaro chaimo Ndakasumuka hangu ndokunanga pachair ndichiti kuna head, Goodmorng.
Ha mhani shuva vanhu vechirume muri week, ndakaona head omedzera mate ndikati ndosvirwa chete nhasi. Takataura hedu asi head ziso ravo rairamba riri pandiri, vakanditi nzvimbo yaiva isati yavanikwa ndaizouya masikati ndocheka ndikaona kuti head vaive voshaya kuti vonditanga sei saka vaida kundidzosa dzosa ndikati too late ndichibva ndakasimuka pachair ndokubva ndazvidonhedza pasi ndokubata gumbo apa ndichinyepera kuti gumbo rangu head vachibva vakasimuka vachiti sorry.
Dear vachiuya pandaive vakasviko ndibata mapendekete vachiedza kundisimudza vanike mboro yavo yakatomira. Ndakavaudza kuti vabate gumbo rangu vatwasudze pachidya wanike vabata nedako apa beche rangu rainge rakazvimba uku richiyerera tumvura ndikabva ndangova bata mboro yavo, murume ane mboro iyeye ino hobvu refu, handina kunonoka kuibuditsa ndichibva ndaiti mukanwa.
Ini hangu mboro ndinoyamwa, headmaster vakabowa ndakavayamwa se lollipop kusvika vaiburitsa vega mumuromo mangu ndikaona kuti vainge vapotsa vanditundira.
Vakaisvotora ndokuno kiya door re office yavo vachibva vafonera secretary wavo kuti asaunze vanhu ku office kwavo, vakati nekuti vaive busy nezve basa. Pavakadzoka vakanditakura vakandigarisa patable ndokundibvisa mini dress yangu vachibva vachonjomara ndokutanga kundidya beche vachiita kusvisvina beans yenyini, akomana apa ndakabva ndakatunda.
Headmaster vakazosimuka vopfekera mboro yavo ikazara mubeche rangu rose uku ichita kudziya, head vanogona kusvira zvavo ivavo ndokubva vakatanga vachikoira mbichana mbichana uku ndichitunda muto wekuti mboro itsvedze ndokubva vakazoita increase speed.
Hameno kuti ndakatunda kangani ipapo ndokubva vakazondifongoresa ndokundisvira nekumashure apo matako angu achitamba tamba ndopandakaita chikapa chemagaro manje.
Nikosida on Kuiswa nyoro mubeche
Copyright © 2021 Kuiswa nyoro mubeche. Powered by WordPress. Theme: Accelerate by ThemeGrill.